Masuuliyiinta xukuumada DDSI oo kulan la qaadatay danjiraha wadanka Norway u fadhiya itoobiya. - Cakaara News
Masuuliyiinta xukuumada DDSI oo kulan la qaadatay danjiraha wadanka Norway u fadhiya itoobiya.
Jijiga (CN) Arbaca, December, 2, 2015, Masuuliyiinta sare ee xukuumada DDSI oo ay hogaaminayso madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah ee DDSI marwo sucaad axmed faarax ayaa hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha DDSI kula yeeshay wafftigii uu hogaaminayay danjiraha wadanka Norway u fadhiya dalkeena itoobiya mudane Andreas Greedar.
Iyada oo ay kulankaasi ugu horayntii ka hadashay madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah ee DDSI marwo sucaad axmed faarax oo ugu mahad celisay waftigan soo booqday deegaanka soona kormeeray mashaariicaha horumarineed ee degmooyinka gobolka shabeele. Waxayna madaxwayne ku xigeenku si qoto dheer uga warbixisay waftigan isbadalka dhaqaale ee deegaanka mudada kooban ku hirgaliyay iyo jihooyinka fulineed ee meelmarinta qorshaha isbadalka koboca dhaqaalaha GTP2, waxayna tilmaantay in uu deegaanku yahay mid hodan ku ah oo uu ilahay ku manaystay khayraadka dabiiciga ah ee dihin iyo xoolaha nool waxayna waftigan u sheegay waxyaabaha ay xukuumada DDSI uga baahan tahay wadanka Norway in ay kala qaybqaataan hirgalintiisa.
Dhankiisa waxaa ka hadlay kulankaasi danjiraha wadanka Norway ee itoobiya mudane Andreas Greedar oo si mug leh ugu mahad celiyay xukuumada iyo shacabka DDSI sida diiran ee loogu soo dhaweeyay deegaanka isaga oo sheegay in ay siwayn ugu faraxsan yihiin isbadalka horumarineed, xasiloone ee ka jira deegaanka somalida itoobiya, wuxuuna sheegay danjiruhu in ay deegaanka siwayn uga taageeriyaan kor u qaadida adeegyada aas aasiga ah ee bulshada.